विधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता : देव क्षेत्री – Peacepokhara.com
विधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता : देव क्षेत्री
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ विधान संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । विधानलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधनको विकल्प नभएको भन्दै सबै साधारण सदस्यलाई विधान संशोधनमा सहयोग गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ । सङ्घको विधान संशोधन, संशोधनपछि सङ्घको अवस्था, भूकम्पले पोखराको पर्यटनलगायत अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलगायत विषयमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष देव क्षेत्रीसँग पत्रकार सुरेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी
भूकम्पपछाडि पोखराको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
अन्यत्रको तुलनामा कास्कीमा भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति कम भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा भने अतुलनीय क्षति भयो । पोखरा पर्यटकका लागि नेपालकै प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । सधै आन्तरिक तथा बा≈य पर्यटकले खचाखच हुने पोखरा भूकम्पपछि सुनसान छ । पोखरा आउने पर्यटकमध्ये पछिल्लो समय करीब ६० प्रतिशत चाइनिज छन् । चाइनिजपछि पोखरामा भारतीय पर्यटक बढी आउ“छन् । भूकम्पपछि पर्यटक आगमन ठप्प जस्तै हुँदा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । विपद्पछि पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न निजीक्षेत्रको पहलमा अहिले प्रवद्र्धनात्मक अभियान अगाडि बढिरहेको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घसमेतको सहभागितामा पोखरा पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा पोखरा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनका लागि विभिन्न गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ ।
पर्यटनबाहेक अन्य व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएपछि अन्य सबै व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । पोखरामा जति बढी पर्यटकीय गतिविधि हुन्छ त्यति नै बढी सबै व्यवसाय चलायमान हुन्छ । होटल, रेष्टुराँ चल्न नसक्दा खाद्यान्नलगायत अन्य व्यवसाय पनि केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । हाम्रो अपेक्षा छ, छिट्टै नै पोखरालगायत देशभर पर्यटकको आगमन बढ्नेछ । सरकारसहित सरोकारवाला सबैले नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश संसारभर पु¥याएर पर्यटकलाई भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय चलायमान भएपछि अन्य सबै व्यवसायलाई टेवा पुग्छ ।
पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नहुँदा पर्यटन व्यवसायमा असर परेको भनिन्छ नि ?
पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भएको भए पर्यटन व्यवसायमा यति धेरै असर पुग्ने थिएन भन्ने लागेको छ । राजधानी काठमाडौंबाहेक देशमा मुख्य शहरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने सन्देश अहिलेको भूकम्पले दिएको छ । यहाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भएको भए पर्यटक सीधै पोखरा आउन सक्थे । पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पहल भएको धेरै समय भइसकेको छ । अहिलेसम्म पनि विमानस्थलको शिलान्यास हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले के–कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?
व्यावसायिक हकहितका लागि आवाज उठाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहयोग गरिरहेका छौैं । व्यवसायीलाई लक्षित गरी समय–समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं । व्यावसायिक हकहितका साथै सङ्घले साामजिक कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । अहिले हामीले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता विधान संशोधनलाई दिएका छौं । सङ्घको विधान दुई दशकभन्दा पुरानो भएकाले समयसापेक्ष हुन सकेको छैन । ४र५ सय सदस्य हुँदाको विधानले अहिले २ हजाार ४ सयभन्दा बढी साधारण सदस्यको भावनालाई समेट्न नसकेको हामीले महसूस गरेका छौं । अहिले सङ्घमा एशोसिएट सदस्यको मात्र प्रतिनिधित्व छ । पोखरामा ६० भन्दा बढी वस्तुगत सङ्घ छन् । सबै वस्तुगत सङ्घ र सदस्यको भावना समेट्ने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । विधान संशोधनका लागि साउनको २३ गते विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । बस्तुगत सङ्घका साथीहरू पनि विधान संशोधनका लागि क्रियाशील भएकाले दुई तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा विधान संशोधन हुनेछ ।
पछिल्लो समय सङ्घमा एकताको अभाव देखिएको हो ?
दुई प्यानलमा उम्मेदवारी दर्ता हुने क्रम बढेपछि सङ्घमा सामान्य मतमतान्तर हुनु सामान्य नै हो । चुनावअगाडि दुई प्यानलमा उम्मेदवारी दर्ता भए पनि चुनावपछि बाहिर सोचेजस्तो सङ्घमा कुनै विवाद छैन । हामी सबै एक भएर व्यावसायिक हकहितको पक्षमा लागेका छौं । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम विधान संशोधन नै हो । अहिले अध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्यमा मात्र चुनाव हु“दै आएको छ । अहिलेको विधानअनुुसार अध्यक्षले नै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । विधान संशोधनपछि सबै पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ । सबै सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने हु“दा प्यानल सिष्टम स्वत हटेर जान्छ । प्यानलमा उम्मेदवारी दिने क्रम घटेपछि गुटबन्दी र विवाद तथा मतमतान्तर क्रमशः घट्दै जान्छ ।
मैले चाहियो भनेको छैन, कांग्रेस एमालेले बुझ्ने कुरा हो
घैंटेलाई मारियो, इन्काउन्टर होइन, हत्या हो : जगदिशनरसिंह केसी (अन्तरवार्ता )
peacepokhara 20 Aug 2015